Chinagbọ oloko na-akwọ ụgbọ ala na China na-amalite Nnwale Anwale | RayHaber
HomeỤWAAsia86 ChinaDraịvụ Ule Ahịa Ọkwọ ụgbọ ala na-adịghị anya na China
08 / 11 / 2019 86 China, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ
onye na-anya nnwale ụgbọ elu na-agba ọsọ na-enweghị ọkwọ ụgbọ ala na China
Mgbapụ Ule Ahịrị Ọkwọ ụgbọ ala nke China na-amalite; Teknụzụ ịchọpụta ihe dị elu na-ahụ ngwa ngwa 350 km / h, nke ndị China mepụtara na-akwụ ụgwọ ya, ma na-arụ ọrụ na akpaghị aka dịka ọkụ, ìhè na agba windo.
China ebidola ụgbọ elu nke na-agba ọsọ ọsọ, nke edobere ije n'etiti Beijing na Zhangjiakou. Ihe nnwale nke ụgbọ elu smart-ọsọ dị elu, nke China mepụtara kpamkpam wee mee atụmatụ ije ozi n'etiti Beijing na Zhangjiakou, malitere.
Yesterdaygbọ oloko ahụ kwụsịrị n'ọdụ Qinghe dị na Beijing ụnyaahụ, ule nnwale ahụ na-amalite. Ejiri teknụzụ kwụrụ ọtọ, ụgbọ elu nke na-agba ọsọ nwere ike iru maili 350 kwa elekere.
Na mgbakwunye, teknụzụ nke anụ ahụ na-enye ohere ikpo ọkụ, ọkụ na agba windo idozi na-akpaghị aka na ụgbọ oloko. Ya mere, enwere ike inye ndị njem njem njem dị ntụsara ahụ.
Linezọ okporo ụzọ, nke na-aga n'etiti isi obodo Beijing na Zhangjiakou obodo Hebei, nwere ogologo 174 kilomita. Railzọ ụgbọ oloko ga-eweta ọrụ ụgbọ njem na 2022 Beijing Winter Olympic Games.
Ụgbọaka eletriki na-agba ọsọ ule na okporo ụzọ okporo ụzọ
Lelee njirimara zuru ezu nke Arslan Halkalı-Nyocha ule nnwale
Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ na France anaghị aga na 2023
Ule na Jeddah-Mecca-Medina elu-ọsọ ụgbọ elu ahịrị…
Mayor Demir, Ọnwụnwa na Usoro Om Line Rail System…
Minista Arslan: ci Usoro nhazi ukwu nke mba a amalitela
Nkwụsị Trasọ Dị Ukwuu N'ihi Oké Mmiri…
N'ihi na elu Speed ​​Zụlite Production nke TÜVASAŞ…
Turkey mbụ driverless Metro na Istanbul ...
Turkey mbụ driverless Metro-emepe
Turkey mbụ driverless Metro Ga
Nkụzi Ọdịdị Dị Elu